Bayern Munich Taariikhda Kubadda Cagta - Sheekooyinka Carruurnimada Hore ee Joogtada ah / Jilayaasha caadiga ah
Home Tags Bayern Munich Taariikhda Kubada Cagta
Tag: Bayern Munich Taariikhda Kubada Cagta
Ku soo Dhawo Hoyga Kubada Cagta Jarmalka ee Kubada Cagta Jaraa'idyada La Xiriira Taariikhda Kubada Cagta ee Bayern Munich. Halkaan, waxaan soo bandhignay akhristayaasha, guulaha ay gaareen labada kooxood ee haatan iyo kan caadiga ah ee Bayern Munich Football Stars ee kubada cagta ciyaaray.
Xaqiiqdii shaki kuma jiro, Bayern Munich waxay runtii sameysay kubada cagta, taageerayaasha ayaana ku faraxsan. Ciyaartoyda haatan iyo kuwa caadiga ah waxay u qalmaan inay ku jiraan taariikhdeena kubadda cagta.
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda la beddelay: Abriil 24, 2020 2
Laga bilaabo, waxaa lagu naaneysaa "Chef D". Waxaan ku siinaynaa caymiska buuxa ee Taariikhda Caruurta ee Alphonso Davies, Taariikh nololeedka, Xaqiiqda Qoyska, waalidiinta, Nolosha Hore, Nolosha, ...
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Bernat'. Dabeecadeena Hore ee Juan Bernat iyo Xogta Loo Baahan Yahay ...
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Genius kubadda cagta oo sida ugu fiican loo yaqaan naaneyska "The Bandit of Bilbao". Javi Martinez Caruurnimada ...
LB waxay soo bandhigaysaa Sheekada Full of Genius kubadda cagta oo ugu fiican ee lagu magacaabo "Fashion Icon". Sheeko noocan oo kale ah
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Leon'. Dabeecadeena Leon Goretzka iyo sheeko xariif ah oo aan la sheegin ...
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Genius kubadda cagta ee ugu fiican ee ay yaqaanaan naaneyska "Niki". Sheekada noocan oo kale ah Niklas Sule iyo waliba ...
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda la beddelay: Agoosto 4, 2018 0
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Benatia'. Dabeecadeena Medhi Benatia Sheeko dheeri ah iyo Raadin Jir-dhereedka ...
LB waxay soo bandhigeysaa Sheekada Full of Genius Football kaas oo si fiican ugu caansan naaneyska "Coco". Our Corentin Tolisso Sheekada Carthood oo lagu daray Qoraal aan la isku qorin ...
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full Story ee Genius kaas oo si fiican u yaqaan magaca; "Thuram Cusub". Dabeecadeena Benjamin Pavard oo ah sheeko xariif ah oo la ...
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta oo si fiican u yaqaan naaneyska; "Mandzu". Sheekada Mario Mandzukic Sheeko iyo Qoraal aan la Xariirin ...